Paco's Varume vanodzoka ne new adventures | Bezzia
Kudzoka kwe 'Los Hombres de Paco' padhuze nepadyo!
Susana godoy | 04/05/2021 14:00 | Nhau
'Varume vaPaco' anga ari mamwe eaya akateedzana akatenderera mumisoro yedu. Raive gore ra2005 patakaona kekutanga vatatu vemapurisa ane hupenyu hwakasiyana asi vari shamwari kwemakore. Kuuya kwake, mhuri yake uye kuda kana kusuwa kwemoyo kuchakurumidza kutikomberedza kune iyo diki skrini.
Saka makore mashanu akatevera, senge zvese zvimwe zvinhu muhupenyu, zvaive zvava kupera. Mhedzisiro iyo yaigara ichitisiya tichida zvimwe, kunyangwe hazvo kuti vazhinji vatambi vakapfuura nemuzviteedzano. Zvakanaka ikozvino anodzoka nomweya mutsva watichakwanisa kuona munguva pfupi iri mukati Kanyanga 3!
1 Kubudirira kukuru kwaLos Hombres de Paco '
2 Mangani mwaka nezvikamu zvine Los Hombres de Paco '?
3 Rutsva rwiyo rweAntena 3 akateedzana
4 Ndekupi kwatingaone 'Los Hombres de Paco'?
Kubudirira kukuru kwaLos Hombres de Paco '
Kunyangwe dzimwe nguva zvichiitika neese akateedzana, kwete nguva dzose imwe neimwe yemwaka wayo inobudirira zvakafanana. Nekudaro, kana vamwe vatambi vayo vakaisiya, pamwe kudzikira kwevatariri kunogona kunge kuri kukuru. Asi chokwadi ndechekuti 'varume vaPaco' pavakasvika paterevhizheni vakaona kuti zvese zvachinja sei. Ivo vaive nezvose zvataida uye kwaive kuseka kwakanaka, nguva dzepfungwa uye dzerudo, zvese zvakabatana necheni yemutikitivha.. Sezvo mwaka waipfuura, vatambi vatsva vakawedzerawo kumarongero aripo ndokuramba vakanyanya kukosha, nenyaya nyowani dzerudo negodo. Chinhu chinoita kuti veruzhinji vafarire zvakare kucherechedzwa. Kune izvi zvese uye nezvimwe zvakawanda, akateedzana akachengetedza vateereri vakanaka uye vateveri vayo vaichema mwaka mutsva.
Mangani mwaka nezvikamu zvine Los Hombres de Paco '?
Iwo akateedzana, kusvika parizvino, ane huwandu hwesere mwaka uye ese acho anowedzera anosvika pazvikamu zvinopfuura zana nemakumi manomwe nenomwe. Sezvo isiri nguva dzese dzaive nezvikamu zvakafanana. Vamwe vakatifadza ne117 sezvazvaive zvakaitika mumwaka wechipiri, nepo zvakajairika ndezvekuti vaive gumi nevaviri kana 14. Paive pakati pehosha nekuvharirwa, Kubvumbi 12 pakanga paine kutaura kwekugona kudzoka. Kutora mifananidzo kwaitarisirwa kutanga iro zhizha kana zvichibvira. Paco Tous akaridza seimwe yevatambi vekutanga kuve mairi. Asi nguva pfupi yapfuura, mazita anozivikanwa kwazvo akapiwa kuumba timu iyo yakambotikunda tese. Muchokwadi, muzhizha re13, Michelle Jenner naHugo Silva vaizosimbisawo kutaridzika kwavo mumwaka mutsva.
Rutsva rwiyo rweAntena 3 akateedzana
Takataura kuti varatidziri vanoratidzika kunge vanochengetwa, saka tichaona zvakare varatidziri vakuru uye boka risinganyatsoziva remapurisa pane ese, kusanganisira Commissioner. Asi kana paine chimwe chinhu chinoshanduka, iko kurira kwaro. Iye zvino inguva yekutendeuka kwaEstopa, vari pamusoro pekuratidzira 'El Madero'. Ndirwo rwiyo rutsva ruchatanga mwaka mutsva weLos Hombres de Paco. Kunyangwe iwe uchirangarira zvirokwazvo iro boka rePignoise, ikozvino ndiEstopa uyo achatora nzvimbo kuti awedzere rwiyo rweakateedzana akabudirira.
Ndekupi kwatingaone 'Los Hombres de Paco'?
Zvinotaridza kuti zvitsauko gumi nezvitanhatu zvitsva zvichave zvakapatsanurwa kuita mwaka miviri. Asi kwekutanga, Inotarisirwa kuratidzwa paAntena 3, mune Prime Nguva purogiramu uyezve ramba uchionekwa kuburikidza neAtresplayer Premium. Izvi ndizvo zvakaitika nezvimwe zvakateedzana izvo zvakazotevera, isu takakwanisa kuona pachena. Kune izvo zvinotarisirwa kuti zviitike zvakafanana neLos Hombres de Paco '. Sezvo asiri munhu wese ane chikuva ichi asi ivo vanoda kuona timu zvakare pamwe chete, vachirwira zvakanaka uye nekurangarira rudo rwekare. Iwe unoda here kuti iburitswe izvozvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Kudzoka kwe 'Los Hombres de Paco' padhuze nepadyo!